Apple TV-ga cusub ee 4K, iMac iyo iPad Pro ayaa diyaar ah dhamaadka bisha May | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV-ga cusub ee 4K, iMac iyo iPad Pro ayaa la heli karaa dhammaadka bisha Maajo
Mararka qaar runtii ma fahminno halka ay ka imaanayaan macluumaadkan, xanta iyo xogahaasi. The caan ah Jon Prosser, ayaa ka digaya in shirkadda Cupertino ay qorsheyneyso inay soo bandhigto moodeelka cusub ee Apple TV 21K kaasoo si rasmi ah loo soo bandhigay Talaadada, Abriil 4, Maajo 20.
La Apple TV 4K cusboonaysiinta oo leh sheeko cusub oo muhiim ah sida Remote Siri iyo xitaa processor-ka ay aad u filayeen dadka isticmaala. Waa run in aysan ahayn dayactir aad u weyn laakiin waxaan dhihi karnaa waxay cusbooneysiiyeen Apple TV 4K iyagoo wata A12 Bionic chip, oo la jaan qaada HDR iyo kuwa kale.
Tani waa Tweet waxaa sii daayay Prosser jir wanaagsan taasina waxay la xiriirtaa taariikhda imaatinka suurtagalka ah ee isticmaalayaasha aaladda cusub ee Apple TV 4K:
Daahfurka iPad Pro waa 21-ka Maajo.
Taariikhda "22aad" ee aan soo sheegay waxay kuxirantahay qaabka 5G ee xamuul qaade waana in la iska indhatiraa inta badan.
Apple sidoo kale waxay soo bandhigi doontaa TV-ga cusub ee Apple 21-ka Maajo. https://t.co/A31ZulKGWa
- Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021
Waxay u muuqataa in moodooyinka 24-inch ee iMac iyo iPad Pro-ka cusub ee sidoo kale la soo bandhigay Abriil 20 ay imaan doonaan sidoo kale taariikhahaas, ee soo socota 21-ka May. Wax yar ayaa ka yar maalin hadhay illaa la sii deynayo moodeelladaan cusub ee iMac, iPad Pro iyo Apple TV 4k, sidaa darteed waxaan dhawaan ka tagi doonnaa shaki. Runtii waxaan u maleyneynaa in waqtiga kama dambeysta ah uu aad ugu dheeryahay rarka laakiin waan arki doonaa waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV-ga cusub ee 4K, iMac iyo iPad Pro ayaa la heli karaa dhammaadka bisha Maajo
Shirkadda Spotify waxay gaaraysaa 158 milyan oo macaamiil ah oo bixiya
Tim Cook wuxuu sii wadi doonaa inuu ku sharaddeeyo telecommuting faafida kadib